Banyere Anyị - Jinhua Ecubmaker Technology Co., Ltd.
Ka anyi mee ka ndi Cube di mfe
Anyị na-commited wetara nri 3D Printing technology nke nwere ike inye
na ụlọ ọrụ n'ọdịnihu ma gboo mkpa ndị ahịa.
Ebe ọ bụ na anyị tọrọ ntọala na 2013, Anyị na-azụlite dị iche iche elu àgwà desktọọpụ 3D ngwa nbipute usoro ka Fantasy. Mgbe anyị nwesịrị ihe ịga nke ọma na usoro Fantasy, ebumnuche anyị ọzọ bụ iji mepụta ihe nwere ike izute mkpa nke ndị okike hụrụ igwe nwere ike ịrụ ọtụtụ ọrụ. Nakwa nke nwere ike ịchekwa ego na oge iji gbanwee igwe na igwe. Anyị mechara rute ebe anyị na-aga. Na 2019, anyị bidoro nke izizi mbụ nke ụwa 4-in-1 3D akpọrọ: TOYDIY 4-in-1. Nke gụnyere FDM otu agba, FDM sọrọ agba 3D Printing, Laser osise, CNC atụ ihe ndị ọzọ ọkachamara atụmatụ.
Anyị nwere karịa ndị otu 10 na ndị otu R&D. Ha niile na-agbaso nrọ ahụ ka ha mepụta ihe maka ndị nkịtị ka ha zụlite ndị ahịa. Ha kpebisiri ike ịme ihe nwa akwụkwọ kọleji nwere ike iji mee ihe. nne na nna etiti ma obu ndi lara ezumike nká. TOYDIY 4-in-1 bụ ihe atụ zuru oke iji gosipụta nraranye ha. Mmepe nke ọkachamara niile na otu ngwanrọ bụụrụ ha nnukwu ihe ịma aka. Mgbe anyị gabigara ụfọdụ ihe siri ike anyị mere ya. Ugbu a TOYDIY bụ ihe kachasị arụ ọrụ nke 3D Printer nke meriri ọtụtụ ndị hụrụ teknụzụ obi.
Companylọ ọrụ na-etolite etolite na-arụ ọrụ na teknụzụ ọhụụ ọhụrụ nwere teknụzụ dị iche iche 3D. Ọnụahịa dị ọnụ ala Jiri ya tụnyere akara ndị ọzọ, mana emebikwala ogo.
N'ime 5,000 m2 ụlọ ọrụ base.The kwa ọnwa mmepụta ikike karịa 500 iberibe 2 ọkachamara ule e
N'ime ndị otu R & D. ọkachamara 20. Na-abawanye itinye ego na nyocha ngwaahịa na mmepe.
Anyị nwere ndị otu na-eto eto ịnụ ọkụ n'obi na-akwado nkwado maka ezigbo ntanetị n'ịntanetị Max 4 awa 'ngwa ngwa nzaghachi ọnụego vidiyo maka ụdị nsogbu nsogbu ọ bụla Ngosipụta dị elu maka Nkwado n'ịntanetị site na ndị ọrụ dị ugbu a.
Ikike nchọpụta na nwebisiinka
Enwere ọtụtụ ụzọ iji kpọtụrụ anyị .Were anyị ihe ọ bụla gbasara ọchịchọ gị. Anyị nọnyeere gị mgbe niile iji nye anyị ọrụ kachasị mma. EcubMaker kwenyere na afọ ojuju ndị ahịa. Nye anyị ohere ijere gị ozi.
Maka Ajụjụ Izugbe:
Maka Ajuju Ajuju:
Maka onye nyocha:
Soro anyị na Social Media anyị ka emelitere maka Ngwaahịa anyị na onyinye ọhụrụ anyị.